NextMping | Keynote - Ramangwana Rehutungamiri
Kurarama Zviitiko & Kudzokorora
Kusvikira Nyamavhuvhu 30th makosi edu ari 50% kubva. Tenga izvozvi
Kufemerwa, ruzivo nezvimiro zvemhando yekuti ungaita sei mutungamiriri akagadzirira
Hazvina kumbobvira zvakamboitika apo nzvimbo dzebasa dzakange iine ambiguity yakawanda, kusagadzikana uye kusanduka kwekuchinja. Vashandi vanonetsekana nekuita zvakawanda nezvishoma, kudzidza nekumhanyisa kwekuvhiringidzika uye kushanda nemamiriro akasiyana siyana. Pane mukana wakakura wekuti vatungamiriri vagadzire ramangwana ravo ivo nemapoka avo.
Nekuwedzera kwekushandurwa kwedigital kune kushevedzera kwevatungamiriri kuti vabatane, vanonzwira tsitsi uye vanokurudzira mapoka avo.
Iyo ichangoburwa uye iripo yekutsvagisa kutsvagorora pane ramangwana basa uye zvazvinoreva kune vatungamiriri nhasi
Statistics uye mafungiro mafungiro pamusoro pevashandi maitiro uye izvo vashandi vanoda nhasi uye mune ramangwana kubva kune vatungamiriri vavo
Ehutungamiri mhando pane 'ini kune isu' mindset uye mapa ramangwana rehutungamiri rwendo
Matipi uye mazano emaitiro ekuwedzera hutungamiri mastery kuti uwedzere kukwezva uye kuchengetwa kwetarenda yepamusoro
Kukurudzira pfungwa dzinogona kuiswa muchiito nekukurumidza kukurudzira kukurudzira kwevashandi uye kubatanidzwa
Zviito zvezuva nezuva zvinoitwa kubatsira vatungamiriri kuti vanzwe vakasimba uye kubatsira zvikwata zvavo kuti zvifuridzirwe uye nekufara kuumba ramangwana rebasa
Cheryl Cran remangwana renyanzvi yebasa uye muvambi weNeMMogovana share inokurudzira, inosimudza uye mazano anoshanda kuti vatungamiriri vagare vakagadzirira ramangwana!
Cheryl anga ari yedu yekuvhara kiyi mutauri wemusangano wedu wepagore TLMI musangano. Iye akange arohwa zvikuru neboka redu - chirevo chake chakapihwa ruzivo uye kutsanangura ramangwana rebasa raive rakakodzera kune iri rakakwira rinoita boka.
Takafarira kuti Cheryl akawedzera sei kubata kwakadai semapikicha evaenzi chiitiko chemanheru apfuura uye iye airatidzira imwe yenhengo dzedu kubudirira apa achipa zano rekunzwisisa zvakare.
Iko kutumira mameseji uye yekuvhota yakanga yakasarudzika uye yakawedzera imwe nhanho yekuwedzera kwakabatana kwevateereri. Taida kushanda naCheryl uye boka redu raimudawo. ”
Tsvaga vhiki nevhiki mazano zvakananga kune yako inbox